မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: စီးပွားရေးပိတ်ဆို.ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော ကျွန်ုပ်တို.အယူအဆ
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံရခြင်းသည် တိုင်းပြည်နှင့်ပြည်သူအားထိခိုက်စေပါသည်။ ထို့အတွက်အငြင်းပွားမှုများရှိ စရာမလိုအပ်ပါ။ တိုင်းတစ်ပြည်အားစီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့် စီးပွားရေးထိခိုက်စေခြင်း၊ ထိုတိုင်းပြည်တွင် အုပ်ချုပ်လျှက်ရှိသော အစိုးရ အား ဂုဏ်သိက္ခာကျစေခြင်း၊ အစိုးရဖွဲ့အတွင်း သဘောထားကွဲစေခြင်းဖြင့် နိုင် ငံရေးပြုပြင် ပြောင်း လဲမှုများပြုလုပ်စေရန် နိုင်ငံ တစ် ကာအစိုးရများက ပုံမှန်လုပ်လေ့ရှိသော ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ် ပါသည်။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များတွင် တိုင်း ပြည်တစ်ပြည်လုံး အထွေထွေအကျပ်အ တည်းဖြစ်စေလိုခြင်းကပါပြီးဖြစ်ပါသည်။
သို.သော်လည်း နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ချို.နှင့် ပညာရှင်ဆိုသူများက မျက်စိစုံမှိတ်၍ စီးပွားပိတ်ဆို.၍ ဆင်းရဲသားပြည် သူများအတွက် ဘာမျှမထိခိုက်သယောင် ဟောပြော ပို.ချ ခြင်း ၊ ကြေငြာချက်ထုပ်ခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြပြန်ပါသည်။
သို.အတွက်အဖြေကရှင်းပါသည်။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို.၍ တိုင်းပြည်ဘာမျှမထိခိုက်ဟုဆိုလျှင် စစ်အ စိုးရလည်း ဘာမျှထိခိုင်မည်မဟုတ်သဖြင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို. မှုများ ပြန် လာပါ ဟုခေါ်လိုက်ရုံသာရှိပါသည်။ Targeted Sanctions များက သာ စစ်အုပ်စု နှင့်သူတို.အပေါင်းအပါများကိုထိခိုက်စေသဖြင့် အလွန်ကောင်း မွန်ကြောင်းဝါဒဖြန်.သူများ လည်းရှိပါသည်။ သို.အတွက်ထိုသူများထိခိုက်သည်ဆိုခြင်းမှာ ဒေါ်လာ သန်း၂၀ ချမ်းသာရမည့် အစား ဒေါ်လာ၁၀ သန်းလောက်သာချမ်းသာ မည့်အ ဖြစ် မျိုးရောက်ရှိစေနိုင် သည့်သက် ရောက်မှုလောက်သာ အဖတ် တင်ပါသည်။ သူတို.ကမဖြုံပါ သို.အတွက် အခွင့် ထူးများ ပင်ထပ်မံရရှိပြီး ပို၍ပင်အဆင်ပြေနိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို.က အရင်ကလည်း ၀န်ထမ်းပါ အခုလည်းဝန်ထမ်းပါပဲ ဒါကြောင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို. တာ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ဘာမျှမဖြစ်ပါဘူးဗျာဟုဆိုသူများ၏ အသံကိုလည်းလေလှိုင်းတွင် နားထောင် ရဘူးပါသည်။ သူတို.ကတော့ အရပ်သားများဖြစ်သည့်အတွက် နားမလည်၍ပြောခြင်းဖြစ်ပါ၏။ ဤသည်ကို ထောက်ပြ၍ ပညာရှင် ဆိုသူများက ကြည့် ပါလား ပြည်သူကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဟုဆိုကြပြန်ပါသည်။
တိုင်းပြည်တစ်ပြည်တိုးတက်ခြင်းနှင့်ဆုတ်ယုတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အထက်၊အလယ်၊ အောက၊် ဆင်းရဲ ၊ချမ်းသာ ပြည်သူအားလုံးနှင့်ဆက်စပ်နေသောအရာဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာပြရလျှင် မြန်မာပြည်တွင် တစ် ချိန်က အချိုရည်၊ စီးကရက်၊ အရက် နှင့်ဘီယာများကို ပြည်ပမှဝယ်ယူတင်သွင်းရ၏၊ သို.အတွက် နိုင်ငံခြား ငွေ (သို.) လယ်ယာထွက် သီးနှံများ ဖြင့်ဖ လှယ်ခဲ့ရသည်။
အရပ်သားအမြင်ဖြင့်ကြည့်လျှင်တော့ ပက်စီ ကုမ္ပဏီပေါ်လာတာ ဦးသိန်းထွန်းပဲချမ်းသာသွားတာပါ ဟုပြောနိုင် သော်လည်း လက်တွေ.အကျိုးတွင်ထိုတစ်ခုတည်းမ ကတော့ပါ။ ပြည်သူများသန်.ပြန်.သောအချို ရည်များသောက်သုံးရခြင်း၊ ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော ကြော်ငြာလုပ်ငန်းများထွန်းကားလာခြင်း၊ တိုင်းပြည်အတွက်အခွန်များရရှိ ခြင်း၊ ပြည်ပမှ အချို ရည်အား သီးနှံများဖြင့်လဲလှယ်စရာမလိုတော့သဖြင့် အခြား ကုန် စည်များ တင်သွင်းနိုင်ခြင်း တို.ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ထို.အ ပြင် ပက်စီကိုလာမှရသော ပိုင်ဆံများကို အလကား မဖြစ်စေရန်ဘဏ်လုပ်ငန်းတစ်ခု တစ်စုံတစ်ယောက်မှ အကြံပြုမှုဖြင့် ထွန်းဖေါင်ဒေးရှင်းဘဏ်ပေါ်လာခဲ့ရ သည်။ London စီးကရက် ၊ Royal Whisky စသည်ဖြင့်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းတို.သည် စစ်အစိုးရနှင့် သူဌေး ကြီးများ၏ ချမ်းသာမှုတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ တိုင်းပြည်အကျိုးနှင့်ဆက်စပ်နေ၏။
စီးပွားပိတ်ဆို.မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို.မမြင် နိုင်သောစီပွားလုပ်ငန်းများ ရောက်ရှိမလာခြင်းကဆယ်စုနှစ် ၂ စုကျော်တွင် အရေ အတွက်ထောင်သောင်းမကရှိနိုင်ပါသည်။ သို.အတွက် အရှက်မရှိ လူလယ်လူရှုပ် ပြည် ပမှရင်းနှီးမြုတ်နှံသူ သူဌေး အငယ်စားများဖြင့် စခန်းသွားခဲ့ရ၏။ ကြီးကျယ်သောကုမ္ပဏီကြီးများမှာလည်း နိုင်ငံတကာတွင် လူလည် ကျနေသော ရေနံ နှင့်သတ္ထုတူးဖေါ်ရေးကုမ္ပဏီများသာလျှင်ဖြစ်၏။ ၎င်းကုမ္ပဏီများသည်လုပ်ငန်းသဘာဝအရကိုက အစိုးရများနှင့်သာဆက် ဆံ ရသည်ဖြစ်၍ အရေထူ အပါးဝ နေကြပြီဖြစ်၏။ ၎င်းတို. အခြေစိုက်သော တိုင်းပြည်တို.၏ အစိုးရများကလည်း ရေနံ၊ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ.စသည့် အရင်းအမြစ်များနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ၎င်းတို.အကျိူးစည်းပွား အတွက် မသိကျိုးကျွန်ပြုကြ၏။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို.မှုအတွက် တိုင်းပြည်တော့ထိခိုက်နစ်နာပါတယ်၊ ဒါပေမယ် စစ်အစိုးကို နိုင်ငံတစ် ကာက ဖိအား ပေးနိုင်တဲ့နည်းဟာဒီတစ်နည်းပဲအကောင်းဆုံးရှိလို ပိတ်ဆို.မှုများ ဆက်လက်ထားရှိပေးပါဟု ရဲ့ဝံ့စွာမပြောကြပဲ။ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို.မှုဆိုတာ ကျွန်တော်တို.ပါတီရဲ့မူဝါဒမဟုတ်ပါ၊ နိုင်ငံတစ်ကာ တိုင်းပြည် တွေက သူတို.ဟာသူ တို.လုပ်တာပါ၊ ပြည်သူ ကိုထိခိုက်တယ်လို မထင်မြင်မိပါ၊ ထိခိုက်လည်း နည်းနည်းပါး ပါးမပါ မပြောပ လောက်ပါဘူး၊ စစ်အစိုးရနဲ. သူတို.အ သိုင်း အ၀ိုင်းလောက်သာ နိုင်ငံခြားဘဏ်စာရင်းတွေ အပိတ်ခံလိုက်ရတာပါ ပြည်သူက ဘဏ်မှာငွေတောင်မစုနိုင်ပါဘူး စသည်ဖြင့် ဝေ့ လည်ကြောင်ပတ်မပြော သင့်တော့ပါ။ ပညာရှင်များသည် လည်းပညာရှင် များပီပီ အမှန်ကိုပြောသင့်ပြီး နိုင်ငံ ရေးခေါင်း ဆောင်များ သည်လည်း ခေါင်းဆောင်ကောင်းပီပီ ပြည်သူအားအမှန်အတိုင်းပြောသင့်ပြီဖြစ်ပါသည်။
ဤသို.ဆိုပါလျှင် စီးပွားရေးပိတ်ဆို.မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မည်သို.သဘောထားသင့်ပါသလဲဟု မေး စရာရှိလာ ပါ သည်။ ထိုအတွက်အဖြေကရှင်းပါသည် ပညာဥာဏ် ဖြင့်ချိန်ဆ၍ စစ်အစိုးရအားအမှန်တကယ် ပြောင်းလဲအောင် လုပ် ဆောင် နိုင်သောနည်းဗျူဟာမဟုတ်လျှင် ထိုနည်းဗျူဟာအားစွန်.လွတ်ကောင်းစွန်. လွတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူများ အတွက် လွန်စွာထိခိုက်နစ်နာစေ၍ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီအချို.က ထိခိုက်မှန်းသိသော်လည်း ပိတ်ဆို.မှုနည်းဗျူဟာအား မစွန်. လွှတ်ခြင်၍ ပြည်သူများ မထိခိုက်သယောင် ကြေငြာချက်ထုပ်နေခြင်းမျိုးကိုရပ်တန်းက ရပ်သင့်ပြီဖြစ်ပါသည်။ မရပ် ချင်လျှင် လည်း ပိတ်ဆို.မှုကြောင့် ပြည်သူတော့ထိခိုက်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီနည်းဗျူဟာကို တော့ဆက်လက်ကိုင်စွဲပါဦးမည်ဟု ရဲဝံ့ စွာ ပြော သင့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို.အနေဖြင့် စီးပွားရေးပိတ်ဆို.မှုသည် စစ်အစိုးရနှင့် လက်ဝေခံလုပ်ငန်းရှင်တို.အား သဘောထားပြောင်းလဲ သွားအောင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်ဟုမယူဆတော့ပါ။ ယခုအချိန်ခါသည် လွန်ခဲ့သော ၁၉၈၈ အခြေအနေနှင့်လည်း လုံးဝကွာ ခြားသွားပြီဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်က နိုင်ငံခြားဝင်ငွေမရှိခဲ့သော စစ်အစိုးရဖြစ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ရေနံနှင့်သ ဘာဝဓါတ်ငွေ. သိုက် များ ပိုင်ဆိုင်သော စစ်အစိုးရဖြစ်နေပါပြီ။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြတ်နှုံမှုများကို အမှန်တကယ်တော့လည်း တားဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်းမ ရှိသ ဖြင့် စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ကောင်းကောင်းရပ်တည်နိုင်လောက်အောင်အထောက်အပံ့ပေး မည့်ကုမ္ပဏီများက ၀င်ရောက်လျှက် ရှိ ပါသည်။ တိုင်းပြည်ဆင်းရဲရခြင်းသည် စစ်အစိုးရအပေါ်တွင်လုံးလုံးလျှားလျှားတာဝန်ရှိပါသည်။ ဤသည်ကိုကျွန်ုပ်တို.က ငြင်း ဆိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို.ဆိုလိုခြင်သည်မှာ မအောင်မြင်နိုင်သော နည်းနာတစ်ရပ်ကို စွန်.လွတ်သင့် သည့်အ ယူအ ဆကို တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူအားထိခိုက်စေ၍ဖြစ်ပါသည်။ တော်လှန်ရေးအမြင်ဖြင့်ကြည့်လျှင်တော့ နစ်နာမှုဆို သည်မှာ ရှိရမည်ဖြစ်ပါသည်။တော်လှန်ရေးတိုင်းပေးဆပ်ခဲ့ရသည်ချည်းဖြစ်ပါသည်။ တော်လှန်ရေးတစ်ရပ်၏ အကျအဆုံး၊ အနိုင်အရှုံး နှင့် အောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းတို.အား တော်လှန်ရေးသမားဟုဆိုသော ခေါင်းဆောင်များက တာဝန် ယူ နိုင်ရမည်ဖြစ်ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို.အနေဖြင့် စစ်အစိုးရကိုသာမက မဆီလျှော်သော နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်များနှင့် တော်လှန် ရေးအတွေး အခေါ်များကို ပါဆန်.ကျင် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
စီးပွားရေးပိတ်ဆို.မှုကြောင့်စစ်အစိုးရဘာတွေဖြစ်သွားပါသလဲဟုပြင်သစ်သံရုံးမှသံတမန် ကိုသွားမေးလျှင် ၎င်းတို. ပိတ်ဆို.လိုက်သည့်အတွက် စစ်အစိုးရနှင့်လက်ဝေခံ သူဌေးကြီးများ မည်မျှဒုက္ခပင်လယ်ဝေကြောင်း၊ ပြင်သစ်ပြည်သို. လာ လည် ခွင့်မရတော့ကြောင်းရွန်းရွန်းဝေအောင်ပြောမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်သစ်ရေနံကုမ္ပဏီကြောင့် စစ်အစိုးရ ဘယ်လို အဆင် ပြေ သွားသည်ဟုပြောမည်မဟုတ်ပါ။ မြန်မာပြည်တွင်ရင်းနှီးမှုတ်နှုံထားသော ကုမ္ပဏီတို.၏ အစုရှယ်ရာများကို ၎င်းတို.ဘယ် လို တိတ်တဆိတ်ဝယ်ထားကြောင်း ရန်ကုန်မှတော်လှန်ရေးသမားဆိုသူများကို ပြောမည်မဟုတ်ပါ။
ယခုနောက်ဆုံးပြင်သစ်အစိုးရတက်လာတော့တရုပ်ပြည်သို. သွားပြီး ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၃၀ ကျော်ဖိုး လုပ်ငန်းစာ ချုပ်များ ကုန်သွယ်ရေးစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုပါသည်။ တရုပ်လူ.အခွင့်အရေးအတွက် တစ်ခွန်းနှစ်ခွန်းပြောဆိုပါသည်။ တရုပ် လုပ် ဘဲကင်အနည်းငယ်မျှစားခဲ့မည်ထင်ပါသည်။ သူကလည်းပြင်သစ်အရက်များလက်ဆောင် ပေးခဲ့ဖွယ်ရှိပါသည်။ နိုင်ငံ ရေးဆို သည်မှာ အသိဥာဏ်အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ပြင်သစ်သမ္မတသာမြန်မာပြည်လာခဲ့လျှင် သူ.စစ်လေယဉ်များက တရုပ် လုပ်ထက် အများကြီးသာကြောင်း စစ်အစိုးရအားနားချမည်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးအား နိုင်ငံရေးလိုမမြင်နိုင်လျှင် ၂၁ ရာစုတွင် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို.အတွက် ခက်ခဲမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူဆိုသည်ကတော့ ခေါင်းဆောင်များအား ယုံကြည်၍ ပုံအပ် ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သူတို.ပါ ၀င်ပါမှရမည်ဆိုလျှင်တော့ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ဆိုသူများလည်း လိုအပ်မည်မ ထင် တော့ပါ။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 6:09 AM